Otu esi ebuli Ubuntu 21.04 ka ọ bụrụ 21.10 Imish Indri - LinuxCapable
October 18, 2021 October 15, 2021 by Jọshụa James
Mgbakwunye – Nyochaa ozi Sistemu
Nkuzi na-esote ga-agafe usoro achọrọ iji kwalite na Ubuntu 21.04 Imish Indri nke ọma.
OS akwadoro: Ubuntu 21.04 ma ọ bụ karịa.
Iji kwalite nke ọma na Ubuntu 21.10, ị ga-achọ ịme iwu na-esonụ na njedebe Ubuntu gị.
Site na ndabara, ekwesịrị ịwụnye ihe ndị a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ iwu ahụ ga-etinyeghachi ngwugwu ndị a.
Ka ịchọta ọdụ Ubuntu gị, pịa ma jide na ahụigodo gị CTRL + TLỌ + T iji weta ọnụ ọnụ ngwa ngwa.
Mara, hụ na etinyekwara mmelite niile. Ekwesịrị ịmelarị nke a, mana ọ bụrụ na Agbagharaghị ya, mee iwu a.
Dabere na njikọ ịntanetị gị yana ihe ndị ọzọ, ọ nwere ike were obere oge. Ozugbo emechara, ndị ọrụ kwesịrị ịhụ windo ndị a na-apụta n'ime nkeji:
Nke a bụ ọkwa ị nwere ike kwalite na Ubuntu 21.10. Kụzie ya "Nkwalite.." bọtịnụ ga n'ihu.
Na-esote, ị ga-ahụ ndetu ntọhapụ maka Impish Indri. Ka ịga n'ihu, pịa "Nkwalite" bọtịnụ.
Na-esote, onye njikwa nkwalite ga-ahazi ngwugwu niile achọrọ ọ ga-achọ ibudata na melite. Ozugbo ọ mechara, ị ga-enweta ngwa ngwa ikpeazụ ikpeazụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele nkọwa ma ọ bụrụ na-ịchọrọ nke ihe a ga-kwalite site na ịpị > Nkọwa.
Ka ịga n'ihu wee malite nkwalite, pịa ihe "Malite nkwalite" bọtịnụ.
Rịba ama na ị ga-ahụ ọkwa mmapụta ozugbo na-agwa gị na agbanyụrụ mkpọchi ihuenyo n'oge nkwalite ahụ. Pịa “Mechie” bọtịnụ imechi ozi wee gaba n'ihu.
Usoro mmelite ga-amalite ugbu a. Nke a ga-ewe ọtụtụ nkeji iji wuchaa dabere na njikọ ịntanetị gị yana ọsọ ngwaike sistemụ. Ozugbo emechara, ị ga-abịa na nhọrọ nke iwepu ngwungwu ochie.
Site na ndabara, ị ga-ewepụ ihe ndị a, mana nke a bụ nhọrọ nkeonwe dịka ụfọdụ na-ahọrọ idobe ha maka mpịakọta.
Na-esote, nrụnye ga-emecha ma ọ bụ idobe ma ọ bụ wepụ ngwugwu ndị na-abaghị uru dabere na nzaghachi gị. Ọrụ na-esote bụ ịmalitegharị sistemụ gị iji mechaa nkwalite gaa na 21.10 nke ngwa ngwa ga-apụta na-arịọ gị ka ịme ya.
pịa Malitegharịa ugbu a” ka ịga n'ihu na ịmalitegharị sistemụ gị.
Ozugbo ịmechara ịmalitegharị sistemụ gị, ị ga-abịa na ihuenyo nbanye. Dị ka n'okpuru, ị ga-ahụla ụfọdụ mgbanwe UI ọhụrụ na mpio nbanye na GNOME 40 kachasị ọhụrụ.
Banye na akaụntụ gị, a ga-akpọrọ gị na desktọpụ Ubuntu 21.10 ọhụrụ gị. Nke mbu, akwụkwọ ahụaja bụzi isiokwu gọọmentị na-anọchite anya Impish Indri, yana ụfọdụ UI ejiriwo iwebata GNOME 40 hichaa.
Ma ugbu a, ngwa ngwa.
Kedu ihe ị chere maka ọdịdị ọhụrụ ahụ?
Ugbu a ị leleela anya na njirimara ọhụrụ dị na ọdụ Ubuntu gị (Ctrl+ALT+T) jiri iwu na-esonụ iji nyochaa nkọwa nkesa ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, na About graphic UI dị na ntọala ntọala, ị nwere ike kwado ozi sistemụ ahụ. Ngwungwu ọzọ dị mma ịwụnye bụ Nchekwa. Iji tinye ngwungwu a, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Ekele, ị kwalitela nke ọma na nkesa Ubuntu ọhụrụ 21.10 nke akpọrọ Impish Indri.
Mgbe nkwalite ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ị họrọ idobe ngwugwu anaghịzi adị ma ugbu a ọ ga-amasị gị iwepu ha.
Mepee ọdụ ụgbọ mmiri gị (Ctrl+ALT+T) ma mee iwu a.
Nke a ga-ehichapụ sistemu gị, kpachara anya na ọ nwere ike were obere oge ebe ị ga-enwe ọtụtụ ngwugwu anaghị akwụ ụgwọ iji wepụ na nkwalite nkesa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi ebulite Ubuntu 21.04 dị mkpụmkpụ gị ka ọ bụrụ mbipụta kachasị ọhụrụ, 21.10 Impish Indri. N'ozuzu, Ubuntu 21.10 kachasị ọhụrụ na-ele anya ma na-enwe mmetụta dị mma karịa Ubuntu 20.10 na 21.04. Iwebata GNOME 40 na-adọrọ mmasị anya, yana ngwa ọhụrụ yana kernel 5.13 dị iche.